Ku dhawaad 10 askari oo Masaari ah oo lagu dilay gobolka Siinaay ee dalka Masar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldKu dhawaad 10 askari oo Masaari ah oo lagu dilay gobolka Siinaay ee dalka Masar
October 14, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamo Masaari ah oo ilaalo ka haya gobolka Siinaay ee waqooyiga dalka Masar. [Sawirka: Anadolu news agency]
Qaahiro-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 12 xubnood oo ciidamada amaanka Masar ah ayaa lagu dilay lix kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay kantarool kuyaala gobolka Waqooyiga ee Siinay.
Weerarka maanta oo Jimce ah ayaa ka dhacay meel 40km u jirta magaalada Bir Al-abd, waxaana loo adeegsaday weerarkaas qoryaha fudud iyo kuwa culusba, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen wakaalada wararka Reuters.
“Koox hubaysan oo canaasiir argagixiso ah ayaa weerar ku qaaday kantarool amaan oo kuyaala waqooyiga Siinaay saakay iyaga oo watay gaari… Ciidamadayada waxay dileen 15 argagixiso ah,” sidaa ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay milatariga.
Ciidamadii dhaawacmay ayaa loo qaaday isbitaal kuyaala el-Arish. Majirto koox sheegatay masuuliyada weerarkaas.
October 25, 2016 Ugu yaraan 12 qof oo ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen guri huteel ah oo kuyaala waqooyi-bari Kenya
April 18, 2017 RW Britain Theresa May oo sheegtay in doorasho guud oo deg deg ah la qabto 8-da June
Saldhiga tababarka milatariga Turkiga ayaa bisha soo socota laga furi doonaa gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida uu sheegay wasiirka difaaca Soomaaliya shalay oo Khamiis ahayd. Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa bayaan ku sheegay in saldhiga [...]